Ingriiska ayaa ku dhawaaqay cunaqabateyn ka dhan ah ajaaniibta lagu eedeeyey xadgudubyada… – Hagaag.com
Ingriiska ayaa ku dhawaaqay cunaqabateyn ka dhan ah ajaaniibta lagu eedeeyey xadgudubyada…
Xoghayaha Arimaha Dibada ee Ingriiska Dominic Raab ayaa ku dhawaaqay cunaqabateyn ka dhan ah dadka ajaanibta ah ee lagu eedeeyay xadgudubyada xaga Xuquuqul Insaanka, oo ay kujiraan dad sarsare oo katirsan Boqortooyada Sacuudiga oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen dilkii wariye Jamal Khashoggi.
Xafiiska arrimaha dibedda ee Ingiriiska wuxuu sheegay in Saud Al-Qahtani oo lataliye u ahaa diiwaanka boqortooyada Sacuudiga – uu qorsheeyay isla markaasina maareeyey dilkii Khashoggi, isagoo gacan ka helay koox 15 qof ah.
Tallaabooyinkan ayaa qayb ka ah qaanuunka cusub ee ciqaabta Ingiriiska, Raab ayaa shaaca ka qaaday astaamaha qaanuunkan Isniintii mar uu hor tagay Golaha Wakiillada (Barlamaanka).
Wasiirka Ingiriiska ayaa sheegay in sharciga uu xayirayo hantida dadka ku lugta leh ku xadgudubka xuquuqda aadanaha kana hor istaagayo inay galaan Boqortooyada Ingiriiska.
Khashoggi, Magnitsky iyo Rohingya
Dadka Cunaqabateyntan la saaray ayaa waxaa ka mid ah 20 Saudi ah, 25 Russia ah iyo laba sarkaal oo u dhashay Myanmar iyo laba hay’adood oo ka socda Waqooyiga Kuuriya, waxaana loo heystaa kiisas dhowr ah, gaar ahaan dilkii Khashoggi ee qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul sanadkii 2018, dilkii lataliyaha canshuuraha ee Ruushka Sergei Magnitsky oo ku jiray xabsi ku yaal Moscow sanadkii 2009, iyo xadgudubyada ka dhanka ah Muslimiinta Rohingya ee Myanmar.
Dadka caanka ah ee lagu bartilmaansaday cunaqabateyntan ayaa waxaa ka mid ah Saud Al-Qahtani, oo ahaa la-taliyihii hore ee diiwaanka boqortooyada, Ahmed Asiri, Taliye kuxigeenkii hore ee sirdoonka iyo mas’uuliyiin kale oo sirdoon ah.
Xafiiska arrimaha dibedda ee Ingiriiska wuxuu sheegay in Al-Qahtani qorsheeyay oo hagay dilkii Khashoggi, iyo in Asiri uu ku lug lahaa dambiga uuna ahaa sarkaal sare oo kooxda ka tirsan.